Daawo: Xukuumadda oo war kasoo saartay kulan uu Rooble la yeeshay madax goboleedyada – Benaadir News Network
Daawo: Xukuumadda oo war kasoo saartay kulan uu Rooble la yeeshay madax goboleedyada
Muqdisho (Benaadir News) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa caawa kulan casho iyo iswareysi ah u sameeyay madaxweyneyaasha dowlad-goboleedyada Galmudug, Jubaland Koofur Galbeed iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Xubnahan oo Muqdisho ku sugan ayaa soo gaaray saacadihii lasoo dhaafay, waxaana weli imaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada HirShabeelle iyo Puntland.
Kulanka cashada ahaa ee Ra’iisul Wasaaruhu u sameeyay madaxdan, ayaa imaanaya iyadoo la filayo in uu Muqdisho si rasmi ah uga furmo Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee xalka loogu raadinayo khilaafka doorashooyinka.
Kulankan ayaa caawa ka dhacay Hotelka Decale oo u dhaw garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, maadaama uu Xalane degay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Sidoo kale waxaa la filayaa in ay berri Muqdisho soo gaaraan madaxweynayaasha Puntland iyo HirShabeelle oo haatan ku maqan deegaanadooda.
Maalinka Sabtida ee 22-ka bishan ayaa lagu wadaa in shirku uu ka furmo teendhada Afisyooni ee xeyndaabka Xalane, maadaama ay berri tahay Jimco, isla markaana aysan weli Muqdisho soo gaarin madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo HirShabeelle.
Khamiistii maanta ee 20-kii May ayey balantu aheyd in shirkaasi uu ka furmo magaalada Muqdisho, balse xukuumadda ayaa sheegtay in dib u dhacaan uu ku yimid arrimo farsamo.
Daawo Afhayeenka Xukuumadda Macalimuu oo faahfaahiyey kulankii caawa
Previous DEG DEG: John Mahama oo ka laabtay inuu noqdo ergeyga Midowga Afrika ee Soomaaliya
Next Mahama oo ka laabtay inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya